သင်ကြားမည့်ဘာသာရပ်များကို သိရှိလိုပါက ဘေးဘက်ရှိ Course နာမည်ကို နှိပ်ပြီး အသေးစိတ် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
I. Software Technician Course
II. Hardware Technician Course
III. Advanced Software Technician Course
Software Technician Course |
Mobile Phone ပြုပြင်ရေး နယ်ပယ်တွင် Service Technician တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်လိုသူများ (သို့) ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းဆိုင် ဖွင့်လှစ်လိုသူများ အတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်ထားသော သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက Mobile Phone Software Service Technician တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းကာလ – ၁ လ ခွဲ
သင်တန်းကြေး – 200000 (နှစ်သိန်းကျပ်)
Software Technician Course နှင့်အတူ Hardware Technician Course ကိုပါ တွဲပြီးတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Professional Software Technician Course တွင် သင်ကြားရမည့် သင်ခန်းစာများ
• Computer အခြေခံ အသုံးပြုနည်း
• Internet အသုံးပြုနည်း
• ဖုန်းဆားဗစ်သမားတိုင်းပြုလုပ်ထားရမည့် Account များ ပြုလုပ်နည်း (Gmail, Huawei ID, Apple ID, Sammobile, Fourm Accounts, etc.)
• Android OS မိတ်ဆက်
• Android Setting များအကြောင်း
• မည်သည့် Android Phone , Software Box မဆို Driver ထည့်သွင်းနည်းများ
• ဖုန်းအတွင်းမှ အရေးကြီး Data , Music, Video, Game များကို ကွန်ပျူတာအတွင်းသို့ သိမ်းဆည်းနည်း/ ကွန်ပျူတာမှ ဖုန်းအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းနည်းများ
• Android Phone Firmware များ တည်ဆောက်ပုံ နှင့် ဖြည်ထုတ်နည်းများ
• Android Phone Firmware များ ရှာဖွေနည်း၊ ရယူနည်းများ
• အသုံးများသော ဖုန်းအမျိုးအစားများဖြစ်သည့် Huawei , Samsung , Sony, Coolpad , Vivo, Oppo, Mi , MTK , Qualcomm, China Clone Phones အမျိုးမျိုး Firmware တင်နည်းများ
• Bootloader Unlock , Relock ပြုလုပ်နည်းများ
• Custom Recovery နှင့် Custom Rom ထည့်သွင်းနည်းများ
• Android Phone အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် Root လုပ်နည်း / မြန်မာစာဖောင့်ထည့်သွင်းနည်းများ
• Pattern, PIN, Password, FRP lock ဖြုတ်နည်းများ (With & Without Software Box )
• MTK ဖုန်းများ Firmware Backup ပြုလုပ်နည်း
• IMEI Backup & Restore
• Miracle Box (Basic Use)
• ဖုန်းများတွင် အဖြစ်များသော ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းများ
အထက်ပါ အချက်များကို တတ်မြောက်ပြီးသူဖြစ်ပါက အဆင့်မြင့် ဖုန်းပြုပြင်နည်းပညာကို ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ရန် Advance Software Technician Course ကို MPPG တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Hardware Technician Course |
Mobile Phone ပြုပြင်ရေး နယ်ပယ်တွင် Service Technician တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်လိုသူများ (သို့) ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းဆိုင် ဖွင့်လှစ်လိုသူများ အတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်ထားသော သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက Mobile Phone Hardware Service Technician တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းကြေး – 300000 (သုံးသိန်းကျပ်)
Hardware Technician Course နှင့်အတူ Software Technician Course ကိုပါ တွဲပြီးတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Professional Hardware Technician Course တွင် သင်ကြားရမည့် သင်ခန်းစာများ
စာတွေ့ (၂) နာရီ + လက်တွေ့ (၂) နာရီ
• အခြေခံ အီလက်ထရောနစ်
• မီတာမျိုးစုံ အသုံးပြုတိုင်းတာနည်း
• မိုဘိုင်းဖုန်း Hardware အခြေခံဗဟုသုတ
• ဖုန်းပြုပြင်လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ မိတ်ဆက် နှင့် အသုံးပြုနည်း
• မိုဘိုင်းတစ်လုံးကို အစအဆုံး ဖြုတ်/ တပ် ပြုလုပ်ခြင်း
• ဖုန်းဆားကစ်ပေါ်မှ ပစ္စည်းများမိတ်ဆက်
• Diagram [ Schematic , Layout MAP ] ဖတ်နည်း/ လက်တွေ့အသုံးချနည်း
• Dynamic Troubleshooting
• Static Troubleshooting
• ဖုန်းတစ်လုံး၏ ပါဝါဖြန့်ဝေပုံစနစ်
• ဖုန်းအားသွင်းမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ပြစ်ချက်ရှာဖွေရှင်းလင်းနည်း
• ရှော့ဖြစ်နေသော ပြစ်ချက်များ ရှာဖွေရှင်းလင်းနည်း
• MIC , Speaker , Display ( LCD and LED ) ပတ်လမ်းများ ပြစ်ချက် ရှာဖွေပြုပြင်နည်းများ
• Backlight ပတ်လမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ပုံများနှင့် ပြုပြင်နည်းများ
• Touch ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်နည်းများ
• SIM , SDCARD , Network , eMMC
နှင့် CPU , IC များအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ပုံ ပတ်လမ်းသဘောတရားများ
• ပြစ်ချက်လိုက်နည်း ၊ ရှာဖွေနည်း ၊ ပြုပြင်နည်း။
• Diagram မလိုအပ်ပဲ မည်သည့်ဖုန်းမဆို ဆက်စပ်တွေးခေါ် ပြစ်ချက်ရှာဖွေနည်း။
Advanced Software Technician Course |
မှတ်ချက်။ ။ MPPG သင်တန်းမှ Software Technician Course ပြီးစီးထားသူ၊ Mobile Service နယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံရှိသူများသာ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။